चीनले एलएसीमा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेको छ, यसको कारण बुझ्न सकिएको छैनः एस जयसंकर - Jyotinews
चीनले एलएसीमा ठूलो संख्यामा सैनिक तैनाथ गरेको छ, यसको कारण बुझ्न सकिएको छैनः एस जयसंकर
ज्योतिन्यूज २०७७ भदौ १४ गते १२:५४
भारतका परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले हिन्दुस्तान टाइम्ससँग विशेष कुराकानीमा भने “यदि भारत–चीन वास्तविक नियन्त्रण रेखामा शान्ति चाहन्छन् भने पछिल्ला सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्नेछ ।”
यसै सवालसँग जोडेर सोधिएको पूर्वी लद्दाखमा अहिले तनावको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जयशंकरले भने, हामी कूटनीतिक र सैन्य माध्यमबाट चीनसँग सम्पर्कमा छौं । हाम्रो दृष्टिकोणमा दुईवटा कुरा अनिवार्य रूपमा समावेश छन् । एउटा हो १९९३ देखि अहिलेसम्म हामीले समय(समयमा चीनसँग केही सम्झौताहरू गर्दै अएका छौं । त्यह सम्झौताको आधारमा दुवै पक्षले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा न्यूनतम बल खटाउनु पर्ने थियो, यद्यपि अहिले त्यस्तोअवस्था छैन, किनकि चीनले ठूलो संख्यामा एलएसीमा सेना खटाएको छ । हामीले यो बुझ्न सकेका छैनौ कि चीनले यो सब किन गरिरहेको छ ? “यदि हामी दुबे देश सिमानामा शान्ति चाहन्छौं भने हामीले ती सम्झौताहरू पालना गर्नुपर्नेछ ।”
“दोस्रो, म सहमत छु कि एलएसीको धारणामा हाम्रो बीचमा केही भिन्नताहरू छन्, तर यी सम्झौताको कारण दुवै देश मध्ये एकले एकतर्फी रुपमा यथास्थितिमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन् तर स्वाभाविक रूपमा, यदि शान्तिलाई प्राथमिकता दिइएन भने त्यस्ता मुद्दाहरू उठ्नेछन् ।”
त्यसो भए कुन देशले त्यो अवस्थालाई राम्रोसँग बुझेका छैनन् ? भन्ने पश्नको जवाफमा जयशंकर भन्छन् “यहाँ धेरै चीजहरू बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि मात्र ठूलो तस्विर बाहिर आउनेछ, जसमा चीन कसरी उदायो र उसले अहिले विश्वलाई कसरी हेर्छ ? कसरी भारतको विकास भयो र आज हामी कहाँ छौं ? पछिल्ला दशकहरूमा अमेरिकाको स्थान परिवर्तन भएको छ र यसको प्रभाव भारत र चीनलगायत सम्पूर्ण विश्वमा रहेको छ यदि यस अवधिमा चीनले आफैलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गरेको छ भने भारतले पनि धेरै प्रगति गरिसकेको छ । चीनको जस्तै भारतको पनि आफ्नै महत्वाकांक्षा छ । त्यसकारण हामीले बीचको बाटो खोज्नु पर्छ । हामीले एक अर्कामा परस्पर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, एक अर्काको लागि मिलनविन्दु बनाउनु पर्दछ । यो हाम्रो आत्माको आवश्यकता हो तर हालसालै जे घटनाहरु भएका छन् तिनीहरुलाई हेर्दा यो धेरै सजिलो हुनेवाला छैन ।”
यस अन्तर्वार्तामा जयशंकरले भने कि कोरोना भाइरस महामारीले पनि विदेश नीतिलाई असर गरेको छ । अधिकांश देशहरूले राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाइरहेका छन् । चाहे ब्रेक्सिट होस्, चाहे अमेरिकाको बारेमा ट्रम्पको सपना होस् वा चीनको लागि जिन जिनपिंगको सपना ।
यद्यपि उनले जोड दिए कि भारतको राष्ट्रवाद एकदमै विशिष्ट प्रकारको छ । उनले भने, “भारत विश्वसँग खडा हुन चाहन्छ, उनीहरूको समस्यामा मद्दत गर्न चाहन्छ । हामी कोरोना पछि भारतीय प्रविधि र प्रतिभाको प्रवर्धन गर्न चाहन्छौं ।”
कुन अमेरिकी राष्ट्रपति भारतका लागि राम्रो साबित होला ? – डोनाल्ड ट्रम्प वा जो बिडेन ? यसको जवाफमा जयशंकरले भने, अन्तिम चार अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू, दुई रिपब्लिकन र दुई डेमोक्र्याटलाई हेर्नुहोस् –ती सबै एक अर्का भन्दा एकदम फरक थिए । तैपनि उनीहरूले भारतसँग सम्बन्ध कायम राखेका थिए । भारतको सन्दर्भमा हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतिले यसअघिको राष्ट्रपति अगालेको धारणालाई नै पछ्याएको देखिन्छ । यदि तपाईले अहिलेका छलफलहरुलाई हेर्नुभयो भने तपाईले बुझ्नुहुनेछ कि डोनाल्ड ट्रम्प वा जो बिडेनको सम्बन्धमा दुबै नेताहरू साझा बिन्दुमा छन् ।”बिबिसी